Socodkii Shucuubaha iyo Qowmiyadaha Dalka - Cakaara News
Socodkii Shucuubaha iyo Qowmiyadaha Dalka
Gambella(CN) Talaado, 8dii December 2015, Waxaa saacadihii danbe ee galabta socod badhmaha magaalada gambella kumaray dhamaanba shucuubaha iyo qowmiyadaha kaladuwan ee kakala yimid deegaanada dalku kakooban yahay iyagoo ay hor kacayaan kooxaha baambaydu.
Socodkan ayay shucuubaha kaladuwani kumuujinayeen sinaanta, cadaalada, midnimada, qaranimada, wadanoolaanshaha iyo horumarka ay keentay 29ka Hidhaar oo uu dastuur kaliyah mideeyay dhamaan umadaha reer itoobiya sanad walbana laxuso 29ka bishan iyadoo hadba uu deegaan kamid ah dalku martigaliyo.
Hadaba, Fagaaraha badhtamaha magaalada ayay qowmiyad walba afkeeda iyo dhaqankeeda kusoo bandhigaysay iyadoo ay kumanaan daawadayaal ahi isugu soo baxeen. Waxaana kamuuqday qurux iyo waliba farxad ay ku dheehan tahay shucuur gaar ah.
Maalintan ayaa ah maalin runtii kuwayn bulshawaynta reer itoobiya meel kasta oo ay caalamka kajoogaan.
Ugudanbayna, Kooxaha fanka dhaqanka iyo suugaanta deegaankeena soomaalida ayaa qayb libaax iyo wacdaro kadhigay fagaaraha socodkan lagu marayay.